Mucaaradka Yemen oo sheegay in aanay ka qayb galeyn kulanka Riyad. – SBC
Mucaaradka Yemen oo sheegay in aanay ka qayb galeyn kulanka Riyad.
Axsaabta Mucaaradka ee Dalka Yemen ayaa intooda badan waxaa ay sheegeen in aanay ka qayb gali doonin kulanka wadahadalka ah ee ka dhacaya Caasimada Sacuudiga ee Riyad,waxaana ay sheegeen in ay ka baaqsadeen,kadib markii Cali C/lla Saalax uu diiday in uu saxiixo heshiiska kulankaasi.
Hogaanka Mucaaradka Yemen Ninka lagu magacaabo Maxamed Al mutawakil ayaa sheegay in uu soo gaarsiiyay Wafdiga ka socda Khaliijka ee waanwaanta ka dhex wada laba dhinac in Madaxweyne Saalax uu diiday saxiixa horu dhaca heshiiska Riyad.
Al mutawakil waxaa uu sheegay in ay daraasaynayaan sidii ay cadaadis ugu saari lahaayeen Cali C/lla Saalax in uu xilka isaga dego,madaama uu ka caga jiidayo shirka xalka loogu raadinayo xilka dagistiisa ee Riyad.
Waxaa la filayay in Cali C/lla Saalax uu saxiixo heshiiska markii uu soo gaaray Sacna xoog hayaha guud ee ururka iskaashiga Khaliijka C/ladiif Al ziyaan.
Wadanka Yemen ayaa weli waxaa kusii kordhaya khasaaraha ka dhalanaya banaabaxyada looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Cali C/lla Saalax,iyadoona inta badan shacabka dalkaasi uu dalbanayo in uu xilka isaga dego.